Fitaovana mandeha amin'ny kofehy, Grinder Angle, Hammer demolition - Benyu
MPANORATRA CLELESS ANGLE
DRIVER DRILLER CAMLLE HAMMER
Mora entina, mora miasa amin'ny haavo sy toerana tery
Hammer rotary adidy mavesatra natao ho an'ireo mpampiasa matihanina
Kalitao tena tsara, fampisehoana avo lenta ary famolavolana ergonomika hain'ny mpampiasa
Zhejiang Benyu Tools Co., Ltd. (anarana taloha Zhejiang Zhongtai Tools), natsangana tamin'ny taona 1993, dia mpanamboatra fitaovana mahery vaika any Shina. Tamin'ny alàlan'ny 27 taona mahery niasa mafy sy fanavaozana mitohy, nanangana rafitra fahombiazan'ny R&D, orinasa mpamokatra, marketing ary serivisy aorinan'ny varotra ny orinasa.
Hammer rotary adidy mavesatra 26MM BRH2618
Fihetsiketsehana fiantraikany 13MM BID1303
China International Hardware Show (CIHS) dia natsangana tamin'ny taona 2001. Nandritra ny folo taona lasa, ny China International Hardware Show (CIHS) dia nizatra tamin'ny tsena, ny indostrian'ny serivisy ary mivoatra haingana. Izy io dia natsangana mazava tsara ho fampisehoana fitaovana lehibe faharoa manerantany taorian'ny INTERNATIONAL HARDWARE FAIR COLOGNE any Alemana.
Toetran'ny tsenan'ny indostria fitaovana
Amin'izao fotoana izao, raha ny maodelin'ny orinasan'ny fitaovam-pitaovan'i Shina, ny ampahany aminy dia mampiseho ny endrika "e-varotra" fitaovana, amin'ny fampiasana ny Internet ho toy ny famenonan'ny fantsom-barotra; raha manome vokatra mora vidy dia afaka mamaha am-pahendrena ireo teboka fanaintainana indostrialy. Ny fampidirana ireo loharano ambony sy ambany avy amin'ny Internet sy ny indostrian'ny fitaovana dia manome vola ho an'ny mpanjifa,
Fampitahana ny indostrian'ny fitaovana eto an-toerana sy any ivelany
Manome lanja lehibe ny tombam-bidin'ny orinasa ny fitaovana vahiny. Ny mpiara-miasa ao an-toerana dia miankina amin'ny fanampiana sy vola miditra. Ny mpanjifa kendrena amin'ny fitaovana anatiny sy avy any ivelany dia mihidy amin'ny indostria voalohany, orinasa manokana ary orinasa manana vina aman-draharaha. Manolo-tena izy ireo hanome azy ireo loharanom-pahalalana izay tsy ampy tamin'ny fiandohan'ny fitomboana mba hanampiana azy ireo hahatratra ny fitomboana haingana amin'ny sanda ara-barotra.